Rute 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Zvino Naomi akanga aine hama+ yomurume wake, murume aiva akapfuma kwazvo,+ wemhuri yaErimereki, ainzi Bhoazi.+ 2 Kwapera nguva yakati, Rute mukadzi muMoabhi akati kuna Naomi: “Ndapota, regai ndiende kumunda ndinounganidza hura dzezviyo dzinenge dzasaririra+ ndichitevera mushure momunhu chero upi zvake angandinzwira nyasha.” Naizvozvo akati kwaari: “Enda hako, mwanasikana wangu.” 3 Ipapo akaenda, akapinda mumunda, akatanga kuunganidza zvaisaririra ari shure kwevakohwi.+ Nokudaro zvakangoitikawo kuti akava muchikamu chomunda waBhoazi,+ aiva wemhuri yaErimereki.+ 4 Zvino tarira! Bhoazi akasvika achibva kuBhetrehema akati kuvakohwi: “Jehovha ngaave nemi.”+ Ivo vaitiwo kwaari: “Jehovha ngaakukomborerei.”+ 5 Bhoazi+ akazoti kujaya raiva ranzi ritarisire vakohwi: “Mukadzi uyu wechiduku ndewaani?” 6 Naizvozvo jaya rakanga ranzi ritarisire vakohwi rakapindura rikati: “Mukadzi wacho wechiduku mukadzi muMoabhi,+ akadzoka naNaomi achibva kunyika yeMoabhi.+ 7 Saka ati, ‘Ndapota, regai ndiunganidze zvasaririra,+ uye ndichakohwa makachekwa hura dzezviyo ndiri shure kwevakohwi.’ Naizvozvo apinda akaramba akamira kubvira panguva iyoyo mangwanani kusvikira iye zvino paagara pasi mumba kwenguva duku.”+ 8 Gare gare Bhoazi akati kuna Rute: “Wazvinzwa here, mwanasikana wangu? Usaenda kunounganidza zvinenge zvasaririra kune mumwe munda,+ uye usabvawo pano uchienda kune imwe nzvimbo, saizvozvo urambe uri pedyo nevasikana vangu.+ 9 Maziso ako ngaave pamunda wavachakohwa, uende navo. Handina kurayira majaya kuti asakubata+ here? Paunenge wava nenyota, endawo kumidziyo unwe mvura ichacherwa nemajaya.”+ 10 Ipapo akawira pasi nechiso chake, akakotama,+ akati kwaari: “Sei ndanzwirwa nyasha nemi kuti mundifunge, ini ndiri wokune imwe nyika?”+ 11 Bhoazi akapindura akati kwaari: “Ndakanyatsoudzwa+ zvose zvawakaitira vamwene vako pashure pokufa kwomurume wako,+ uye kuti wakasiya sei baba vako naamai vako nenyika yehama dzako ukauya kuvanhu vawakanga usina kumboziva.+ 12 Jehovha ngaakupe mubayiro wezvaunoita,+ uye ngapave nomubayiro wako wakakwana+ unobva kuna Jehovha Mwari waIsraeri, ane mapapiro awauya kuzotsvaka kupotera pasi pawo.”+ 13 Iye akati: “Ndinzwirei nyasha, ishe wangu, nokuti mandinyaradza uye nokuti mataura muchisimbisa+ mushandikadzi wenyu, kunyange hazvo ini ndingasava somumwe wevashandikadzi venyu.”+ 14 Zvino Bhoazi akati kwaari panguva yokudya: “Swedera kuno, udye chimwe chingwa,+ useve chimedu chako muvhiniga.” Naizvozvo akagara pasi pedyo nevakohwi, uye iye aimugamuchidza zviyo zvakakangwa+ iye odya, zvokuti akaguta akatosara nezvimwe. 15 Akabva asimuka kuti aunganidze zvaisaririra.+ Zvino Bhoazi akarayira majaya ake, achiti: “Muregei aunganidzewo zvasaririra machekwa hura dzezviyo, uye musamunetsa.+ 16 Ivaiwo nechokwadi chokuti mamuvhomorera zvimwe pazvisote zvehura, muzvisiye kuti azviunganidze,+ uye musamutuka.” 17 Zvino akaramba achiunganidza zvaisaririra mumunda kusvikira manheru,+ achibva azopura+ zvaisaririra zvaaiva aunganidza, zvikava inenge efa+ yebhari. 18 Akabva azvitakura, akapinda muguta, uye vamwene vake vakaona zvakasaririra zvaaiva aunganidza. Pashure paizvozvo akabudisa zvokudya zvaakanga asiya+ paakanga aguta, akavapa. 19 Zvino vamwene vake vakati kwaari: “Waunganidza zvanga zvichisaririra kupi nhasi, uye washanda kupi? Munhu ava nehanya newe ngaakomborerwe.”+ Naizvozvo akaudza vamwene vake waakanga ashanda naye; uye akati: “Murume wandashanda naye nhasi anonzi Bhoazi.” 20 Naomi akati kumuroora wake: “Ngaakomborerwe naJehovha,+ iye asina kurega kuva nomutsa worudo+ kuvapenyu nevakafa.”+ Naomi akati kwaari: “Murume wacho ane ukama nesu.+ Iye ndomumwe wevadzikinuri+ vedu.” 21 Rute mukadzi wacho muMoabhi akabva ati: “Atiwo kwandiri, ‘Ramba uri pedyo nevanhu vangu vechiduku kusvikira vapedza kukohwa kwose kwandiinako.’”+ 22 Naizvozvo Naomi+ akati kuna Rute muroora wake:+ “Mwanasikana wangu, zviri nani kuti uende nevasikana vake, kuti varege kukunetsa mune mumwe munda.”+ 23 Iye akaramba ari pedyo nevasikana vaBhoazi kuti aunganidze zvainge zvasaririra kusvikira kukohwa bhari+ nokukohwa gorosi kwapera. Uye akaramba achigara navamwene vake.+